Top Noosa restaurants to eat at – Nway Oo
Travelling & Foodie
Top Noosa restaurants to eat at
c2dadmin December 7, 2021 January 10, 2022
5,188 thoughts on “Top Noosa restaurants to eat at”
Latt saung4U
ရွှေရူပါဦး ခေုသလုံးကြီးတာ အာဏာမသိမ်းခင်က အထည်ချုပ်မှာလုပ်ခဲ့တာလား မသိဘူးနော်
မိုးလေးအုံလာတော့…စိတ်ကဖေါက်ချင်လာပြီ…ဟိုလူလွမ်းသလို… ဒီလူလွမ်းသလိုနဲ့…. ဒါနဲ့ထားထက်ထက်လေးသတင်းဘာကြားကြသေးလဲဗျ… သတိရလို့ 😎😎😎😎😎နတ်တစ်ပါး
i like it click app
Aung Naing Htun💢 U A N 💢 says:
💥 Click Daily Click Ever Done.💥
Daw Min Min Myat says:
မအလစစ်ခွေးတွေကို ငရဲပို့ဖို့ကြိုးစား click မယ်
Thein Thein Han says:
All Clicker morning per 🌞
စတင် click ပါပြီ💙
Zaw Htet Htet Zaw.🔴🔴🔴 says:
မနေ့က တို့မိသားစု ကလစ်တာ ပွိုင့် ၅၀၀ ကျော်ရပါတယ်..၂၃၀ နဲ့မစ်ရှင်အောင်ပိုလို့ကျေနပ်မိ.
The stars are about to go home
Clickerတို့ရေ တချို့ commentတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ကြတယ်ဟုတ်။ခုချိန်မှာတို့တွေစည်းလုံးနေမှရမှာလေနော်။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြစ်တင်တာလေးတွေလျော့ပြီး တလရ အောင်ဖို့၊တစ်နေ့တာ missionလေးတွေအောင်ဖို့ကိုကြိုးစားကြရအောင်ပါ။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမြင်မတူတာလေးတွေခဏဘေးချိတ်ထားရအောင်လေနော်။ဒီတလရ အောင်မှ စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ တောထဲက တို့ညီကိုမောင်နှမတွေအိမ်ပြန်ရမှာမို့ပါ။ မကောင်းတဲ့ comment တွေကြောင့် clickတာလေးတော့ရပ်မပစ်လိုက်ပါနဲ့နော်။
Benjamin Than says:
မနှစ်ကတည်းက ပတ်ပြေးနေတာ ခုထိအိမ်မပြန်နိုင်သေးဘူး
Well done and I haveagood feeling 😊👍🙏
Hay,,,, Yoooooooo??????? 😎😎😎😎ဘယ်သူတွေဘာဘဲပြောပြော 😎😎😎အနေမပျက်တဲ့ရွှေနတ်။ 🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒လက်ဆောင်မှာအမြဲရှိနေမှာပါ။ 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
အော်ဒါဆို လက်ဆောင်နတ်ပေါ့ ဘာနတ်ပါလိမ့်တွေးနေတာ😅 ကလစ်ကာတွေထဲ မသိနားမလည်တဲ့အမိုက်အမဲတွေပါရင်လည်း ဗွေမယူပဲ မစတော်မူပါ ကလစ်ပေးတော်မူပါအုံးလို့🙏🙏😂
ဟျောင့်မောင်နတ်တစ်ပါး မလိမ္မာတဲ့ကောင်တွေကိုလည်း ကိုင်ပစ်လိုက်စမ်းပါကွ….တန်ခိုးတွေပြစမ်းပါ ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောသလို ပြောရရင် အပင်ကြီးလို့သာနတ်ကွင်းဖြစ်နေတာပြစရာတန်ခိုးကမရှိ ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေပြီနဲ့တူတယ်​ေ ငါလည်းလေလွင့်နတ်ပဲကွ….
in the end of coup
Thanks for your informative, looks delicious. I really want to visit there one day with you.
Fighting all !!
Okay, We will visit one day. If you see me, say hello naw
Ok Sammi, Hope to see you there..
OK, I hope so too
မနက်က ၅နာရီ နိုးလို့ တယ်လီဂရမ်က အရင်နေ့က Link တွေနှိပ်ပြီးပြီ 😌
🔥⚡ကိုဒီမို စီ နိူင် ⚡U A N⚡🔥 says:
🌈 ကိုယ်နေတဲ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ့်တဘို့ထဲ
🌈ကြည်တဲ့သူတွေ အများကြီး၊ ကိုယ် အဆင်ပြေရင်ပြီး
🌈 ရော ၊ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်း အဆင်ပြေ🌈ရင် ပြီး..ပြီးရောသမားတွေ အများကြီး၊ ရွာတွေ မီးရှို့ခံ
🌈ရလို့ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဝမ်းစာပါမကျန်၊ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်နေကြ
🌈သူတွေက၊ အဲ့ဒီ တဘို့ထဲသမား၊ တကိုယ်ကောင်းသမား
🌈တွေစားနေတဲ့ ဆန်၊စားနေတဲ့ထမင်း ဖြစ်အောင် စိုက်
🌈ပျိုးပေးခဲ့တဲ့သူတွေ၊ ဒီကျေးဇူးရှင်တွေကို စာနာသင့်တယ်၊ သိတတ်သင့်တယ်၊
🌈 သူတို့ကို၊ ပြည်သူတွေကို အသက်စွန့်ကာကွယ် ပေးနေ
🌈တဲ့ ပြည်ချစ် PDF တွေတွက်၊ လိုအပ်သမျှ အထောက်🌈အပံ့ ပြည့်စုံရအောင်၊ ဘာမှပင်ပန်းတာလဲ မဟုတ်တဲ့၊
🌈 ကလစ်နှိပ် ထောက်ပံ့ပေးတာကိုတော့၊ သေချာ လုပ်
🌈ပေးသင့်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးသိတတ်ရင်ပေါ့ ။
🌈 တဘို့ထဲသမားဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီ အချောင်ရချင်စိတ်နဲ့
🌈 မျောလိုက်မနေကြနဲ့၊ သိတတ်ပါ၊စာနာပါ၊ ကလစ်ကြ
🌈ပါ ၊ အစစ အရာရာထောက်ပံ့ကြပါ၊ အရင်းမစိုက်ရတဲ့
🌈 ထောက်ပံ့ရေး ကလစ်ငွေရဖို့၊ ကလစ်ပေးကြပါ၊
🌈 ကလစ်ကာအသစ်တွေ၊ သိတတ်သူ၊စာနာတတ်သူတွေ
🌈 အများကြီး အများကြီး လိုအပ်နေပါတယ်၊ ပြည်သူတို့။
🌈 We Are Digital Strikers..CLICKERS.
🌈 We Support PDF & We Win.
🌈We Must Be Get” Truely Justice” & “Democracy”.
If we fight together, we must win
တစ်ခါလွဲရင် ဘယ်လောက် ကြာတတ်လဲ?
ဒင်းကြောင့် ငါတို့မှာ အိပ်ချင်တာလဲမအိပ်ရ
ငါတို့နိုင်ရင် ဒင်းတို့တဖွဲ့လုံးကို ပြန်ကလစ်ခိုင်းရမယ်။
Shwe Nyaung တော ဂေါ် လီ says:
Baby Girl 私はここにいるよ。どこも行かずに待ってるよ。You Know That I Love You だからこそ、心配しなくていいんだよ
အနာဂါတ် အတွက် သမာသမက် နဲ့
အထီးကျန်စွာ ကလစ် နေရတယ်။
IG သို့ လှမ်းခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပြစေ။
We’re supporter. We’re clicker. I love all clicker.
တူး တူး says:
အရင်ကထက် ပိုကလစ်နေလဲ mission က ever fail ပဲ 😔
နေချင်တာပေါ့…အရင်လို စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ မြို့ပတ်လည်သဘာဝရှုခင်းတွေဆီသွားပြီး…ပျော်နေချင်တာပေါ့…ုဒါပေမယ့် ခုချိန်မှာမလုပ်နိုင်သေးဘူး…လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိလည်း အသက်ပေးနေကြတဲ့သူတွေတွေးပြီး မပျော်နိုင်ဘူး…အထောက်အကူလေးပဲဖြစ်ပါစေတော့ရယ်လို့ နိုင်သလောက်ပါဝင်နေတာ တစ်ခြားထက် ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံဖို့..အသက်ပေးခွင့်မရှိတော့ တန်ဖို့မဲ့သလိုခံစားရတယ်…တစ်ခြားမြို့တွေထက် ကိုယ်တွေမြို့က ပိုစည်ကားနေတာမြင်တိုင်း ကလေးတွေကိုအားနာပါတယ်..
ကလစ်နေတုန်း စခ ကားနဲ့တိုးတဲ့အချိန် ဆွံ့အနေတဲ့ felling က လုံးဝခံစားလို့မရဘူးဟယ်။
ကိုယ့်ကားဆီကို စခတွေ လမ်းလျှောက်လာတာကို ဖုန်းကြီးကိုင်ပြီးကြည့်နေရတဲ့ felling က လုံးဝခံစားလို့မရဘူး
ဥပဒေအရ ပြောပြောပြီးဖမ်းတယ်ခိုးတယ်လုတယ် တရားဥပဒေကို ဦးနှောက် နဲ့နှလုံးသားမှာ မရှိပဲ ပါးစပ်ဖျားမှာပဲရှိတဲ့ကောင်တွေကို မောင်းထုတ်ဖို ဆက်လက် ကလစ်ကြပါစို့
Let us all join together 😊😉😄
Aung Naing Htun⚡U A N⚡ says:
🔥 Daily Click Ever Success Done 🔥
ဂျိုးဇက်မက်ကင်နွန်ဟာ သူ့ခြံအနောက်ဖက်ကမြေကွက်လပ်မှာ တွင်းတစ်တွင်းတူးနေတယ်။
ဘေးဘယ်ညာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး ချွေးတစ်ချက်သုတ်လိုက်ကာ တွင်းကိုဆက်တူးပြန်တယ်။
ခဏနေတော့ စောနကတွင်းထဲကို အမှိုက်အိတ်အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ပစ်ထည့်လိုက်ကာ မြေတွေပြန်ဖုံးနေတယ်။
မြေတွေပြန်ဖုံးပြီးလုလုအချိန်မှာ မောမောပန်းပန်းနဲ့ သူ့ လက်ထဲကမြေတူးဂေါ်ပြားကို လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။
အဲ့ဒီနောက်ခြေလှမ်း ၃ – ၄ လှမ်း လှမ်းလိုက်စဉ်မှာပဲ ပုံကနဲပစ်လဲသွားတယ်။
ဂျိုးဇက်မက်ကင်နွန်ဟာသူ့ခြံထဲမှာ မေ့လဲနေကြောင်း အိမ်နီးနားချင်းတွေက အရေးပေါ်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။
ကယ်ဆယ်ရေးတွေရောက်လာချိန်မှာ အသက် (၆၀) ရှိ ဂျိုးဇက်မက်ကင်နွန်ဟာ အသက်မရှိတော့ပဲ နှလုံးရပ်ပြီးသေဆုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ မနေ့ကခြံထဲမှာတွင်းတူးနေတာကို မြင်လိုက်ကြောင်း အိမ်နီးနားခြင်းတစ်ယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။
ရဲကအဲ့ဒီတွင်းကို ပြန်ဖော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူနဲ့အတူနေတဲ့ သူ့ရည်းစား အသက် (၆၅) နှစ်ရှိပက်ထရစ်ကာဒန့်ကိုအမှိုက်အိတ်ထဲမှာ တွေ့ရပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ် ထရန်တန်မြို့မှာ အတူနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ရင်ခွဲရုံမှာစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာ သူ့ရည်းစား ပက်ထရစ်ကာဒန့်ဟာ လည်ပင်းညှစ်ပြီးအသက်ခံရကာ သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ရဲကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူသက်ခဲ့တဲ့သူ့ရည်းစားကို မြေမြှုပ်နေစဉ်မှာ သူပါအသက်ထွက်သွားလိမ့်မယ်လို့ လုံးဝသိထားခဲ့ပုံမပေါ်ပါ။
သက်သက်လွတ်ကြိုက်တဲ့… ချစ်သူလေးတစ်ယောက်တော့လိုချင်မိ… မီးပျက်သွားတော့မှောင်ထံမှာကလစ်နှိပ်ရင်ဆုတောင်းမိ…. 🤔🤔🤔🤔🤔မီးမမှန်တဲ့တိုင်းပြည််ထဲက… အထီးကျန်ဆန်နေတဲ့နတ်… 🤔🤔🤔🤔🤔🤔
Jully mon mon says:
အင်း တလရ မအောင်သေးခင် မသေချင်သေးဘူး။ ငါတို့တိုင်းပြည်မှာ တက်နေတဲ့ ဖွတ်တွေ ထွက်သွားပြီး လူငယ် အညွန့် အဖူးလေးတွေ၊ပညာတတ်တွေ ခေါင်းဆောင်လို့ တောက်ပနေတဲ့ အနာဂတ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ new generationတွေကို ကြည့်ချင်သေးတယ် ၊၊ဒါကြောင့် စုပေါင်းအားနဲ့ကလစ်ကြမယ် ၊ဖွတ်တွေ ခွေးတွေကို မြေလှန်ဖို့ ငါတို့ pdfတွေကို ကူကြမယ်။ အတူတူဆိုရင် ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်တယ် ။
Let us all join together and encouragement to Democracy. together 😊😁😉😉😉😄😁😊😘❣️♥️🙏🙏
ဒီနေ့အတွက် ပွိုင့် ၂၂၀ ပြည့်ခဲ့ပါပြီ..🥰🥰..မီးကအခုည ၈ နာရီက စလာတာဆိုတော့ ဆက် Run.ပါဦးမယ်.. ၃၀၀ ကျော်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်..🥰💪
Photos of meals, restaurants and sceneries are very nice.
လက်ဆောင်က ကလစ်ရင် vpn ကဘာသုံးရတာလဲ
Point တေရရင် click တာ အဆင်ပြေလား
V4C တို့လို vpn နဲ့ရပါတယ် ၊ US,UK, Australia, Canada တို့လို နိုင်ငံတွေမှာထားပြီး ကလစ်ရင်ရပါတယ်၊ လင့်ကိုနှိပ်လို့
ဝဘ်ဆိုဒ်ထဲရောက်ရင် ၁၀စက္ကန့်လောက် ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးသလို သုံးပေးရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်
ညီငယ် ၊ညီမငယ်တို့ ကြိုးစား ကြသလို ကျွန်တော်လည်း ခွန်အားစိုက်ထုတ် ကြိုးစားပါတယ်။ လုံးဝ အလျှော့ မပေးပါဘူး
OMG,,,, OMG,,,, OMG,,, 🤔🤔🤔🤔🤔🙄🙄🙄🙄🙄😠😠😠😠😠😡😡😡😡😡😡နတ်တစ်ပါး 😎😎😎😎😎🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒
Ko Hnin says:
Great and support it.
🌈 Click Daily Success Done 🌈
တလရကြီးမှာ နိုင်တဲ့ဘက်က တာဝန်ယူခဲ့တယ်
မကလစ်ရရင်ကို နေလို့မရဘူး ငါဒီနေ့အလုပ်မလုပ်ရသေးဘူး ဆိုတဲ့ခံယူချက်က မျက်စိနှစ်လုံးဖွင့်ထဲက ကလစ်ဖို့ပဲတွေးတယ် ညနက်မှ Fb ကိုအဖြေသွားကြည့်တယ် သတင်းကြည့်တယ်
လိပ်ပြာလုံချင်တယ် ညတစ်နာရီလောက်အထိကြိုးစားပြီးကလစ်တယ် အခုတော့ငိုက်နေတယ် 😊😊😊
သန်လျင်မှာအိမ်ရှေ့ထိဆိုင်ကယ်လိုက်ဖမ်းတယ် တွေကမိန်းခလေးတွေပစ်တာအရမ်းလန်းတာဘဲတဲ့ကိုယ်နဲ့တော့မကြုံသေးဘူး ကြားတာနဲ့တင်ချစ်မိနေ လုပ်တာလဲမမိတော့ ခုမှသိတယ်သန်လိင်ကတိတ်တိတ်လေးအားပေးနေတာကလေးတွေကို သန်လျင်သူဖြစ်ရတာဂုဏ်ယူချင်ပါတယ် နိုင်သလောက်ကူနေပါတယ်
ချစ်ချစ်ပြေးတော့- “114 “နဲ့ဘဲကျေနပ်ရတာပေါ့ 😢😢😢😢😢😬😬😬😬😬🤒🤒🤒🤒🤒နတ်
လူ ကြီး says:
မတရားတာကို မတရားဘူးလို့ မပြောရဲရင်တောင်မှ အိမ်မှာနေပြီး ကလစ်ရဲတယ်ဆိုရင်ကို ဒါဟာမတရားမှုကို တော်လှန်ခြင်းပါပဲရှင့်။ နည်းစနစ်ကျကျကလစ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်ချစ်တို့ရေ။
ငါလိုးမသားများစုဝေးရာ… အသင်းကို.. အာဆင်နယ်ဟုခေါ်သည် 😡😡😡 ခုမှ..ဂိုးတွေတဒိုင်းဒိုင်းသွင်းပြီ.. ခြေစွမ်းပြ.. 😠😠😠 တွေးမီတိုင်းဒေါ်သထွက်၊..😡😡😡နတ်တစ်ပါး 😎😎😎😎😎
Previous Previous post: New Intrepid Premium accommodation
Next Next post: Soak in these7hot springs in Utah